Tsy irery i Jesosy | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
«Voombo miaraka nohomboana tamin’i Kristy» hoy ny apostoly Paoly (Galatiana 2,20), fa tsy i Paoly irery no tsara. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny Kristianina hafa (Kolosiana 2,20). "Halevina miaraka aminy isika," hoy izy tamin'ny Romanina (Romana 6,4). Inona no hiseho eto? Ireo olona rehetra ireo dia tsy tena tao amin'ilay havoana tany Jerosalema. Inona no resahin'i Paoly eto? Ny kristiana rehetra, na fantany izany na tsia, dia miombona amin'ny hazofijalian'i Kristy.
Tsy izay ihany anefa. Manaiky koa isika - ary mandray anjara amin'ny - nitsanganany tamin'ny maty! «Andriamanitra nanangana antsika niaraka taminy» (Efesiana 2,6). Teo izahay ny marainan'ny fitsanganana. «Natsangan'Andriamanitra niaraka taminao niaraka taminy» (Kolosiana 2,13). «Miaritra miaraka amin'i Kristy ianao» (Kolosiana 3,1).
Tokony ho toy inona izany fiainana vaovao izany? "Ary toy izany koa, hevero fa efa maty ny ota, dia velona ao amin'i Kristy Jesosy. Ka aza avela hanjaka ao amin'ny vatanao mety maty ny ota, ary aza manaraka ny faniriany. Aza atolotra koa ny rantsan-tànanao hanota toy ny sandan'ny tsy rariny, fa ny tenanao amin'Andriamanitra dia toy ny efa maty sy velona ankehitriny, ary ny vatanao ho an'Andriamanitra dia sandan'ny fahamarinana » (Andininy 11-13).
Raha fantatsika miaraka amin'i Jesosy Kristy dia azy ny fiainantsika. «Izahay dia resy lahatra fa raha nisy maty ny tsirairay, dia maty avokoa izy rehetra. Ary maty ho an'ny rehetra izy, ka tsy honina intsony ireo monina eo fa izay maty sy nitsangana ho azy » (2 Korintiana 5,14: 15).
Nosoratan'i Paoly tamin'ireto teny ireto hoe: "voahombo tamin'ny hazo fijaliana miaraka amin'i Kristy. Velona aho, nefa tsy izaho izao, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Satria izay miaina ankehitriny amin'ny nofo, miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, izay efa tia ahy ary nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana 2,20).